Is Fulitaanka HGY28 HGY32 - Shiinaha Qingdao CO-NELE Group
Is fuulitaanka HGY28 HGY32
Supply Kartida: 300 / dhigay per Month
Mode of drive: Si buuxda u Haydarooliga
Qaabdhismeedka Boom: 28-3M, 32-3M / 4
Pipeline dhexroor: 125mm
Marka la isticmaalayo, waxaa ancred dabaqa rito initiallly diyaariyey. Haddii loo baahan yahay si ay u kaca, waxaa loo baahan yahay wiish munaarad kor u kaca baddesho dabaqa xiga sare ee isagoo wakhti fuulitaanka anchored.one kulmi karaan shuruudaha ka baddesho la taaban karo laba dabaq.
Design Compact, qaliin fudud, ammaanka lagu kalsoonaan karo oo ku haboon dhismaha dhismaha sare
shayga HGY28-3M HGY32-3M HGY32-4M
nooca Floor go'an Self fuulitaanka
horizontal Reach 28m 32 32
Sare u qaadid xaglaha 0-85 ° 0-85 ° 0-90 °
Boom Open Jidka 3v 3v 4R
Length Boom (mm) 12000/9100/6200 13960/10600/7430 88800/8000/8001/7840
End RubberHose 3
Ballaca Inner Φ125mm
miisaanka 18.5t 19.5t 19.6t
Iyada oo miisaan No miisaan
xirxirida 40HQ * 2 40HQ * 2 40HQ * 2
Dhismaha kaca Cabral ayaa la filaayo in ay codsanayso design processor. kaca The qaatay-xoog sare saxan bir wax soo saarka leh habka cilmiyeed. Waxaa qoreysa muuqaalka quruxda badan, rigidity ka xoogbadan, iyo xoogga, hubinta tayada fiican oo la isku halayn karo.
nidaamka B. Haydarooliga
Waxyaabaha G taxane qaatay Germany Rexroth bamka caansan dunida ee saliidda, waalka saami
(la xamili hawlgalka) iyo waalka dheelitirka la faafi sare, halka taxane C iyo E
waxyaabaha qaatay Germany Rexroth solenoid jiho waalka gacanta iyo dheelitirka waalka
la faafi sare. Waxa uu si wax ku ool fogaadaa ah magdhow ku iman kara ee kaca
oo sababi laga yaabaa in ka badan dhaqdhaqaaqa xawaaraha marka kaca hoos u dhaco, oo lama filaan ah
kororka cadaadis dhululubo saliidda ayaa hoos ciidamada dibadda, sidaas isku halaynta of kaca ah
ayaa kor u kacay.
C.Inner Haydarooliga Oil Haanta
Taangiga saliidda Haydarooliga Inner Eebay dhismo laysku dhejiyey oo ay ishu free. Waxay ku siinaysaa weyn
sahlan loogu rakibo, dismounting iyo dayactirka, taasoo loo xaqiijiyo adeeg dheer
nolosha iyo waxqabadka fiican.
Sida qaab jir qaab, xarunta fuulitaanka waa dabacsan, lagu kalsoonaan karo oo ku haboon
, waayo, dismounting.
E. Hannaanka Slewing iyo Reducer
Slewing waxyaabaha reducer qaatay brand dunida caanka ah ee Italy Comer dhigay, la
torsion weyn. La socon la waalka dheelitirka slewing dhafan by dhigay
Germany Hawei, waxay gaadhaysaa hawlgalka siman iyo qaab lagu kalsoonaan karo oo xasilloon.
F.Wireless maamusha Remote
Waxyaabaha taxane G anfaco analoogga xakamaysada fog wireless mihnad gaar ah by dhigay
Germany Hetronic, oo ay la socdaan waalka saami by Germany Rexroth sameeyey, waxa ay taasi dhaqdhaqaaqa siman, saamaynta Haydarooliga xadidan, iyo qaab lagu kalsoonaan karo. Taas laga soo tago,
waxa ay taasi suurto gal sharciyeynta xawaaraha stepless iyo ganacsigii multi iyo dhexgalka slewing, kaas oo xoojinaya hufnaanta shaqada si weyn.
■ C iyo E waxyaabaha taxane ay qaataan analoogga xakamaysada fog wireless mihnad gaar ah by Taiwan TELECRANE, taas oo waa wax fudud oo ku habboon in ay shaqeeyaan, aadka u adkaysi u dhigay
qas iyo isku halayn karo ee waxqabadka.
■ taxane kasta waxaa weheliya la xakamaysada fog St Paul loo isticmaalo in lagama maarmaan.
Nidaamka xakamaynta korontada la ansixiyay adduunka brand caanka ah ee qaybaha korontada, sida
sida Japanese Omron iyo Faransiis Schneider. The ilaalinta si toos ah multi ayaa lagu wadaa ilaa in
barnaamijka ay gacanta ku, si looga fogaado misoperation iyo in la hubiyo isku halaynta nidaamka ee.
Tiirka laga sameeyey-xoog sare saxan bir qaab square, iyadoo muuqaalka fiican,
rigidness iyo xoogga, iyo sidoo kale isku halaynta sare.
Previous: Taagan HGY28 ganacsigii ka baddesho la taaban karo
Taagan HGY28 ganacsigii ka baddesho la taaban karo
Taagan ganacsigii ka baddesho la taaban karo
Cinwaankaaga: Yuhuangling Industry Estate, Degmada Chengyang # 413, Qingdao City Shiinaha